Guudmarka Company :
TKT, sida soo saaraha ugu horeysay oo hogaaminaya hagaajiye hawada baska iyo qaboojiye gaari xamuul ah ee Shiinaha, ayaa u hibeeyeen ilaa ay soo saara qaboojiye baska lagu kalsoonaan karo, hufan oo dhaqaale iyo qaboojiye gaari dunida.
In Shiinaha, waxaana nala soo saarta alaabta oo tayo sare leh sida OEM ah shirkad Yutong Bus iyo CIMC tan iyo 1998. Waxaan nahay soo saaraha ugu saameynta badan ee baska iyo gaari qaboojiye ee Shiinaha. Ilaa iyo hadda, waxyaabaha our ay bilaabeen in la soo bandhigay in 65 dal ee Europe, Asia, North America, South America iyo Africa, muteystay sumcad sare iyo koboc dhaqaale suuqyada oo dhan.
Dhamaan waxyaabaha TKT, oo ay ku jiraan qaboojiye gaari xamuul ah iyo qaboojiye baska, waa CE shahaado for waxqabadka oo dhan, iyo Shirkadda ayaa shahaado by ISO9001: 2008. Ugu muhiimsan waa in waxqabadka lagu kalsoonaan karo alaabta our ayaa la tijaabiyey by macaamiisha in ka badan 70 dal, gaar ahaan dalalka aad u kulul, sida Mexico, Colombia, Qatar iyo Saudi Arabia, iwm
TKT joogto ah diirada doonaa dadaalka aan ugu jirno ku saabsan alaabta oo tayo sare leh, adeegga ugu fiican ee curinta iyo farsamada ee nidaamka qaboojiyeyaasha ah ee dunida. arrinta meesha aad joogto No, TKT noqon doonaa dib-up oo lagu kalsoonaan karo iskaashiga xoogan aad ee Shiinaha weligiis.
Technology Advanced :
1) edaab Technology High si Hel Super Cool Baska iyo gawaadhida,
2) Dooro Shirkado ka World Wide, iyo Iskaashi la World Top Brand sida Partners, sida Bitzer, Bock, Danfoss, Sandén, Valeo, cabaa iyo Goodyear ECT,
3) Germany Import Machine si keena Condenser iyo Evaporator gariiradda in hay Tayada Sare ka Tallaabada First;
4) Imtixaanka Class First Lab la Machine Keenista American in hay Performance Best iyo Rate gaabinta ugu horeyay for Product kasta;
Kooxda Professional :
1) 25 Injineerro la Master iyo Doctor Degree si ay kuu siiyaan Assistance Technical waqti kasta;
2) 61 Injineerro la Degree Bachelor in la siiyo 24 Hours Service Online,
3) 480 Shaqaalaha leh 4-8 Years duwashada Experience in damaanad All Details lagu jiro Period ee Production;
4) Professional International Sales Dadka Siinaysa Service 7X24, iyo ku caawi in aad Heli Money More iyo Save Qiimaha on Aragti kasta oo aad Iibsiga iyo Iskaashiga la TKT;
5) 45 Ka dib markii Shaqaalaha Sales ee Shiinaha iyo Buuxi Chain Sales ee 58 Wadamada in aad siisaa Perfect ka dib Service Sales;
Fadlan Ku raaxayso Iskaashiga Journey la thermo Kingtec.